कृष्णराज सर्वहारी बुधवार, माघ १२, २०७३
1112 पटक पढिएको
१७पुसमा प्रेस काउन्सिलले ०७१/७२ को वर्गीकरणको नतिजा प्रकाशित गर्‍यो । सूचना विभागको अभिलेखमा सात हजारभन्दा बढी पत्रपत्रिका दर्ता भए पनि वर्गीकरणका लागि नौ सय १० ले मात्र फारम भरेका थिए । तीमध्ये ७७ वटा वर्गीकरणमा परेनन् । नतिजा प्रकाशन हुनु के थियो, वर्गीकरणमा नपरेका र घटुवा भएका पत्रिका सञ्चालकहरू हुल बाँधेर काउन्सिल परिसर पुगे । चित्त नबुझेर संविधान जलाउने समूहकै सिको गर्दै उनीहरूले वर्गीकरणको नतिजा जलाए ।
विभिन्न दलनिकट पत्रकार संगठनका पदाधिकारीदेखि दलका नेताहरूको ढोका चहार्दै आफूहरूमाथि अन्याय भएकाले बोलीदिन आग्रहसमेत गर्न भ्याए । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा मालेलगायत दलका अगुवाले उनीहरूको मागमा समर्थन जनाए । माओवादी केन्द्रको भातृसंगठन प्रेस सेन्टरले त विज्ञप्ती नै जारी गरेर उचित छानविन हुनुपर्ने बतायो । काउन्सिलको वितरण सम्परीक्षण अधिकृत रामप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘सूचना विभागमार्फत् वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकालाई नगद बाँडिन थालेपछि ठगी पत्रकारिताको विकृति मौलाएको हो ।
बरु, नगदभन्दा छपाइ कागजमा सहुलियत दिएको भए विकृति कम हुने थियो कि ?’ ठगी गरी सूचना विभागको हण्डी खान पल्किएका पत्रिका सञ्चालकहरू आफ्नै समाचार र सम्पादकीय त हुबहु छाप्छन् भने विभाग र काउन्सिलमा मात्रै बुझाउन २/४ प्रति छाप्ने, त्यत्ति पनि जाँगर नलागे फोटोकपीसमेत बुझाउने गरेको रिपोर्ट छ । वर्गीकरणका लागि अयोग्य ५८ पत्रिका हुबहु छन् । ‘वर्गीकरणमा नपरेर पाखुरा सुर्किँदै आउनेहरूलाई सप्रमाण देखाउँदा हिस्स परेर काउन्सिलको कार्यक्रममा मुखै नदेखाउनेहरू पनि छन्,’ पोखरेल भन्छन् ।
सूचना विभागका निर्देशक राजु भण्डारीका अनुसार गत वर्ष वर्गीकरण सुविधावापत करिब १४ करोड रुपैयाँ बाँडिएकामा यस वर्ष १८ करोड नाघ्ने अवस्था छ । ‘क’ वर्गमा पर्ने दैनिकले मासिक ३० हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । काउन्सिलका अधिकृत पोखरेलका अनुुसार लगातार दुई वर्ष हुबहु छाप्नेलाई पनि न्यूनतम ‘घ’ वर्गमा राख्ने गरिएको छ । तेस्रो वर्ष पनि उही गल्ती दोहोर्‍याएमा बल्ल वर्गीकरणबाट हटाइन्छ । ‘घ’ वर्गमा पर्ने दैनिकले मासिक १३ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । दुई वर्षसम्म हुबहु छापे पनि वार्षिक डेढ लाख रुपैयाँ कुम्ल्याएकै छन् ।
हरेक वर्ष वर्गीकरणमा चित्त नबुझेर आउनेहरूको हुलबाट काउन्सिलका अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्की आजित छन् । भन्छन्, ‘सूचना विभागको महानिर्देशकको अध्यक्षतामा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, काउन्सिल, विज्ञापन संघ, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूलाई समावेश गरी विशेषज्ञ समिति बनाइएको हुन्छ । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा वर्गीकरणको नतिजा प्रकाशित हुन्छ । तर, अन्तिममा सबै अपजस काउन्सिलमाथि आइलाग्छ ।’ नतिजामा चित्त नबुझे पुनः वर्गीकरणका लागि आवेदन दिने म्याद ९ माघसम्म तोकिएको छ । काउन्सिलले पुनरावलोकन समिति पनि गठन गरिसकेको छ । पुस मसान्तसम्म ८७ वटा पत्रपत्रिकाले निवेदन दिएका छन् ।
आफ्नै लेखरचना, सम्पादकीय हुबहु छाप्ने, पत्रिका नछापी फोटोकपी बुझाउनेजस्तो ठगी पत्रकारिता गर्दै राज्यको ‘हण्डी’ कहिलेसम्म खाने ?
आफ्नो पत्रिका यो वर्गमा पर्‍यो भनेर गर्व नगर्ने तर लोककल्याणकारी विज्ञापनवापत मासिक पाउने सुविधामा मात्रै ध्यान जानाले विरोधको स्वर हरेक वर्ष देखिने गरेको अध्यक्ष कार्कीको बुझाइ छ । गत वर्ष मधेश आन्दोलन र महाभूकम्प पीडित क्षेत्रबाट प्रकाशित पत्रिकाको न्यूनतम प्रकाशन संख्या नपुगे पनि निवेदनका आधारमा सहुलियत दिन प्रयास गरिएको काउन्सिल स्रोत बताउँछ । तर, मधेशका पत्रपत्रिकालाई वर्गीकरणमा काखापाखा गरिएको समाचार पनि नआएको होइन । अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘मधेश, पहाड र हिमालका रूपमा वर्गीकरणमा हामीले कुनै पक्षपात गरेका छैनौँ । बरु, मातृभाषी पत्रपत्रिका, महिला र दलित सम्पादक भएकालाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ ।’
मुल्यांकनका लागि फारम भर्नेबेला हजारभन्दा कम प्रकाशित हुने विवरण कसैले भर्दैनन् । यद्यपि, काउन्सिलको छड्के अनुगमनबाट भाग्न सक्दैनन् त्यस्ता पत्रपत्रिका । नाम मात्रको छापिने पत्ता लागेपछि तिनको स्वतः घटुवा हुन्छ । तथापि, कुन बजारमा जाने र कुन गोजीमा मात्र सीमित पत्रिका हो भन्ने छिनोफानो काउन्सिलले अझै गर्न सकेको देखिँदैन । काउन्सिल पदाधिकारीको टाउको दुःखाइ बनेको छ यो विषय । वर्गीकरणलाई सम्बन्धित जिल्लामै विज्ञहरूको समिति बनाएर नतिजा प्रकाशन गर्न सके ‘हण्डी’ पत्रकारिता धेरै हदसम्म रोकिने सम्भावना रहेको जानकार बताउँछन् । काउन्सिलले यसबारे सोच पनि नबनाएको होइन, कार्यान्वयन भने भएको छैन ।
वर्गीकरणको उद्देश्य पत्रपत्रिकाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गराउने हो । तर, गुणस्तरमा ध्यान नदिई राससको ग्राहक नभए पनि उक्त सरकारी एजेन्सीका समाचार अधिक प्रयोग गर्ने, आफ्नै लेखरचना र सम्पादकीय हुबहु छाप्ने, पत्रिका नछापी फोटोकपी बुझाउनेजस्तो ठगी पत्रकारिता गर्दै राज्यको ‘हण्डी’ कहिलेसम्म खाने ? पैसा नै कमाउने भए त अरु पेशा अपनाए पनि भइगयो नि ।